Nkọwa ihe omimi Otu esi echebe ebe nrụọrụ gị site n'ịbụ onye na-egwu
Ịntanetị bụ ihe enyemaka dị ukwuu nke nwere ikike na-enweghị nsọtụ. N'ihi ya, onlinen'elu ikpo okwu na-enye ọtụtụ ụzọ ndị ụdị na òtù dị iche iche nwere ike isi zute ndị na-ege ha ntị yana ebe ahịa na-akparaghị ókè.Ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-ebute ụzọ azụmahịa e-azụmahịa iji guzobe ebe nrụọrụ weebụ ha ma nwee ike ịmepụta mgbasa ozi ahịa ha. E nwekwaraọtụtụ ndị na-ede blọgụ na ọtụtụ blọọgụ na-aga n'ihu n'ịntanetị. Mgbe ha na-aga ebe e-commerce, nchekwa ha bụ otu n'ime ọtụtụ ndị ọzọị kwesịrị ịtụle - how to setup a wireless home office network.
Mgbe anyị na-eme weebụsaịtị, anyị na-elekwasị anya na nnyefe ọrụ, afọ ojuju ahịa, naUX arịrịọ. Imirikiti usoro ahia nke saịtị na-ejikarị nyocha Search Engine Optimization (SEO) dika okwunyocha na njikọ. Ihe nwere ike ime ka onye ọ bụla nwere ike ịnweta na ebe nrụọrụ weebụ abụghị echiche nke na-echebara ọtụtụ mmadụ echiche.
Mgbe ị na-amụta otú ị ga-esi gbochie mwakpo ike, ọ dị mkpa ịmụta ụfọdụusoro nke nwere ike igbochi ụfọdụ hacks. Nik Chaykovskiy, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-echetara gị ọdịiche nkịtị na ụzọ iji zere ha:
Mwakpo a nwere ike ịgụnye ozi njehie yana ụdị ntinye ederede. Mgbe ị na-eme weebụsaịtị,ọ dị mkpa ime ka aha ahụ bụrụ oghere ma ọ bụ ihe efu. Nke a nwere ike ịgọnahụ hacker ụfọdụ ozi bara uru, nke ha nwere ike ijimepụta mwakpo ha. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ozi ezighị ezi kwesiri ịbụ okwu okwu enyi. Ụfọdụ mmehie nwere ike inye ndị omempụ echiche nansogbu nke usoro..
Igodo nkpọchi akaụntụ.
Njirimara a na-eme ka akaụntụ kwụsịrị mgbe ị gbalịsịrị mgbalị ọtụtụ nbanye.Ịhapụ ụfọdụ nkwụmụgwọ ndị a kpaara aka na-enye onye ọrụ njirimara nke onye ahụ ahụhụ ụfọdụ uru nchebe n'elu onye hacker. Iji paswọọdụ nwere ike ịbụihe dị mkpa ndị mmadụ nwere ike iji mee ka nchekwa nke weebụsaịtị ha dị mma. Usoro Captcha nwekwara ike igbochi logos akpaaka nkenwere ike isi na bots. Ha na-ahụkwa na ọ bụ onye dị adị na-eji saịtị ahụ, ọ bụghị onye robot.
mgbagwoju okwu mgbagwoju anya.
Ọ dị mkpa iji okwuntughe ederede dị oke mkpa na ngalaba nchịkwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị.Okwuntughe ederede nwere ike igbochi gị na ebe nrụọrụ weebụ site na mgbochi dị mfe. Okwuntughe dị ka 12345 enweghị nchebe ma nwee ike iduga ọgụ.O di nkpa iji okwuntughe okwuntughe jiri okwu okwu mbu puru iche. Ọ dịkwa mkpa ịnọgide na-agbanwe paswọọdụ gị. Ịnwere ike ime ka nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị dị otú a.
E nwere ọtụtụ ụzọ site na ndị hackers nwere ike ịchọta ụzọ ha na ebe nrụọrụ weebụ. Ụfọdụ n'imendị kasị nkịtị ụzọ site na hackers mbanye anataghị ikike a na ebe nrụọrụ weebụ na-agụnye SQL ogwu ogbugba yana Cross Site Scripting. Ọ dị mkpaiji mee ka nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nke ndị ahịa gị dị mma site na ụzọ nhazi ndị dị na ntuziaka ahụ dị n'elu.Ị nwere ike ịmezi ụzọ weebụ na-arụ ọrụ na-egbochi ohere nke onye hacker nwere ihe ịga nke ọma n'ịwakpo ebe nrụọrụ weebụ.Nche nke iji weebụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị dị n'okpuru aka ha. Ndị na-agba ịnyịnya nwekwara ike izuru ozi ahịa ndị bara urudị ka kaadị akwụmụgwọ. Ọ dị mkpa ịtụle akụkụ a mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị.